April 2013 ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
Author: lubo601 | 10:19 PM | No မှတ်ချက် |
Thet Tun shared Myanmar News Update's photo.
မိတ်ဆွေတစ်ဦး ပို့ပေးလိုက်တဲ့ Isreal - Facts of History အကြောင်းကို ဖတ်ကြည့်နေပါတယ်။ ၁၅ မိနစ်လောက်ပဲ ကြာမယ်ဆိုပေမဲ့ နာရီများစွာ ကြာသွားပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာ ကမ္ဘာကျော် အစ္စရေးလူမျိုး (ခရစ်ယာန်သမ္မာကျမ်းစာ အရဆိုရင် က္ကုသရေလလူမျိုး) အကြောင်းဆိုတော့ ......
For sale: Burmese virgins မြန်မာပြည်၏ ပန်းတော်ဦး ရောင်းရန်ရှိသည်
Author: lubo601 | 10:15 PM | No မှတ်ချက် |
၁၉၈၈ သွေးမြေကျ စစ်အာဏာသိမ်းမှုကြီး၏ အကျိုးဆက်ရလဒ်က ဥပဒေမဲ့အခြေနေတခုလုံးဆီသို့ ဆိုက်ရောက်ခဲ့ရပြီး၊ အနာဂတ်ရှေ့ခရီးအလားလာက ကြောက်ခမန်းလိလိတုန်လှုပ်ဖွယ်ရာ ဖြစ်၏။
Google က ထုတ်မယ့် မျက်မှန်တဲ့
တစ်ချို့မိန်းမတွေ ဘောလုံးပွဲကို ဘာကြောင့်မုန်းသလဲဆိုတော့....ဆိုတော့....:)
Author: lubo601 | 5:10 PM | No မှတ်ချက် |
ဖြစ်ရပ်မှန်နဲ့ ထင်မြင်ချက် Facts Vs Opinion
Author: lubo601 | 4:49 PM | No မှတ်ချက် |
တစ်နေ့တစ်၌ ယောက်ျားပျိုတစ်ယောက်သည် သူ၏ညာဘက် testis ရှိရာကပ်ပယ်အပြင်တွင် စိမ်းနေ၍ ဆရာဝန်သွားပြ၏။ ဆရာဝန် မှစစ်ဆေးပြီးနောက်.......
" မတတ်နိုင်ဘူးငါ့ညီရာ ခွဲထုတ်လိုက်ပါတော့ "
နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ ဆင်းရဲငြိမ်းခြင်းလား၊ ဘာမှ မရှိခြင်းလား (၂)
ဒါဖြင့်ရင် မဂ္ဂရှစ်ပါးဟာ နိဗ္ဗာန်ရဲ့ အကြောင်းတရား မဟုတ်ဘူးလား။
မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး ကျင့်ကြံပွားများမှ ဆင်းရဲငြိမ်းတာဆိုတော့ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးဟာ ဆင်းရဲငြိမ်းခြင်း ဆိုတဲ့ နိဗ္ဗာန်ရဲ့ အကြောင်းတရားပေါ့လို့ စောဒကတက်စရာ ရှိပါတယ်။
Author: lubo601 | 4:41 PM | No မှတ်ချက် |
နာမည်ကျော်ကြား ဂန္တ၀င်စကား - ဘိုးလှိုင်
နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ ဆင်းရဲငြိမ်းခြင်းလား၊ ဘာမှ မရှိခြင်းလား (၁)
မေး။ ။ ဆရာတော်ဘုရား ... တပည့်တော် ရိုသေစွာ လျှောက်ထားပါသည်။
(မစိုးမိုးသူ၊ ဒုတိယနှစ် အင်္ဂလိပ်စာ၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်)
ကျွန်တော်ကို မွေးကာစတုန်းက အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ပွေ့ချီထားခဲ့တယ် .. ကျွန်တော့်အမေပေါ့
ကျွန်တော် အရွယ်ရောက်လာတဲ့ထိ အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ဂရုစိုက်ခဲ့တယ်၊ အတူကစားပေးတယ် .. ကျွန်တော့်အစ်မပေါ့
~ကလေးတွေ ဘယ်အရွယ်မှာ ငွေအကြောင်း ဘယ်လောက် သိထားသင့်လဲ (REPOST)~
သမ္မတအိုဘားမားရဲ့ ညွန်ကြားချက်အရ သူရဲ့ ငွေကြေးနဲ့ ဘဏ္ဍာရေး ထိပ်တန်းအကြံပေးအဖွဲ့က ကလေးတွေ ဘယ်အသက်အရွယ်မှာ ငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လောာက် သိထားသင့်တယ်၊ ဘယ်အရွယ်မှာ ငွေကို ဘယ်လို စသုံးသင့်တယ် ဆိုတာကို ၁၈ လကြာ သုတေသန လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
Ko Tun Htike shared Chitthu Sky's photo.
နယူးယောက်မြို့လေဆိပ်မှာပါ။ ယူနိုက်တက်အဲလိုင်းက လေယာဉ်တစီးမထွက်ဖြစ်ဘူး။ ဒါကြောင့် လေယာဉ်အေးဂျင့်အမျိုးသမီးလေးတယောက်ထဲ အဲဒီလေယာဉ်ပေါ်လိုက်ပါမဲ့ခရီးသည်တွေအတွက် နောက်လေယာဉ်ကိုပြန်ပြီးဘိုကင်လုပ်ပေးနေရတယ်။
Thet Tun shared Nine Nine Sanay @ နိုင်းနိုင်းစနေ's photo.
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာ လူစည်ကားတဲ့ဈေးတန်းတစ်ခုကို ဆိုင်ကယ်စီးပြီးဖြတ်တယ်။ အဲဒီမှာ ဈေးခြင်းတောင်းဆွဲထားတဲ့ အဒေါ်ကြီးတစ်ဦးနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်မိတယ်။
UWSA ၀ပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်ဟာ ပထမဆုံးအကြိမ် အဖြစ် တရုတ်နိုင်ငံမှ ဆုံလည်ပစ်လို့ရတဲ့ လက်နက်တပ်ဆင်ထားတဲ့ ရဟတ်ယာဉ်များကို ရရှိခဲ့ကြောင်း ဧပြီ ၂၉ ထုတ် Janes Intelligence သတင်းမှာ ဖော်ပြပါတယ်။
Ko Mg shared Zaw Wann Maung's photo.
အာဏာရှင်နိုင်ငံတွေမှာ အာဏာရှင်တွေဟာ နောက်ဆုံးအချိန်ထိ တစ်ဦးတည်း အာဏာကိုဆုပ်ကိုင်သူနဲ့ တစ်ပါတီတည်းမှာပဲ ဦးဆောင်သူပြောင်းလဲသွားတဲ့ အာဏာရှင်ပုံစံမျိုး တွေ ရလေ့ရှိပါတယ်။ ကမ္ဘာ့သမိုင်း မှာ ဘယ်အာဏာရှင်မျိုးမှ အာဏာကို လွယ်လင့်တကူ စွန့်လွှတ်တယ်ဆိုတာ မရှိခဲ့ဖူးပါဘူး။
Aung Htun postedaphoto to Aung Myint Htun's timeline.
ဒါပေမဲ့ မျှစ်တွေကို ဆေးဆိုး ထားတယ်ဆိုတဲ့ သတင်း ထွက်လာပြီး နောက်မှာ မျှစ်ကို စားဖို့ လက်တွန့် သွားကြပါတယ်။
Author: lubo601 | 5:58 PM | No မှတ်ချက် |
ကြေးနီစီမံကိန်း ဖျက်သိမ်းရေး ထပ်မံဆန္ဒဖော်ထုတ်
မန္တလေးမြို့မြေဈေး အိမ်ဈေးတွေ ပိုမို မြင့်တက်လာ (ရုပ်/သံ)
မွန်ဂိုလီယားနိုင်ငံမှ ဒီမိုကရေစီ ညီလာခံ (ရုပ်/သံ)
တန့် ယန်းလမ်းခွဲမှာ ယာဉ်တိမ်းမှောက် လူ ၅ ဦးသေ ၊ ၂၄ ဦး ဒဏ်ရာရ (ရုပ်/သံ)
သုံးခွမြို့ မှ GSM ဖုန်းလိုင်း ခေါ်မရ၊ ပြောမရ ဖြစ်နေရမှု
ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံရသူ သေဆုံးမှုဖြင့် ရဲသုံးဦးကို ရာထူးမှ ထုတ်ပယ်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် မွန်ဂိုလီးယားသမ္မတ ပူးတွဲဟောပြောမည်
ရခိုင်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အစီရင်ခံစာနှင့်ပတ်သက်ပြီး ရှင်းလင်း
Author: lubo601 | 9:19 PM | 1 Comment |
သက္ကရာဇစ် ၂၀၉၉ ခုနှစ်ငရဲပြည်မှာပေါ့ကွယ်...အိုစမာဘင်လာဒင်။ဆာဒမ်ဟူစိန်။ဟစ်တလာ။
ဂဒါဖီနဲ့ မြန်မာပြည်ကို ၁၉၈၈ နောက်ပိုင်း ချောက်ထဲကျမှာစိုး၍ ကယ်တင်ခဲ့သူဆိုလား...ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဆိုသူ တစ်ဦးလဲရောက်နေပါတယ်။
Author: lubo601 | 4:57 PM | No မှတ်ချက် |
"ဟံသာဝတီသတင်းစာ သာဓု တရားစွဲမည်"
by Ter Tee (Notes) on Friday, June 1, 2012 at 8:07pm
လွန်ခဲ့သောနှစ် ၃၀- ခန့်လောက်က သာဓုတစ်ယောက် စာရေးဆရာ ဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်နေချိန်ကာလ၊
သာဓု ပင်ကိုယ်စိတ်အတိုင်း မဟုတ်မခံ မှန်ရာကို အားမနာတမ်းပြောတတ်ရေးတတ်သော စိတ်ဓါတ်က
ပြင်းထန်နေသည့် သမယ .... ။
တနေ့သော် နံနက်စောစော သတင်းစာ ရောက်လာလာချင်း ကြော်ငြာပိုင်းကို ကသုတ်ကသက် လှန်လိုက်၏။
သတင်းစာမှာ ဟံသာဝတီသတင်းစာဖြစ်လျက် ထိုနေ့ကထုတ်ဝေသော အဆိုပါသတင်းစာတွင် သာဓု၏စာအုပ်တစ်အုပ် ကြော်ငြာပါရမည့်နေ့ဖြစ်၍ ကြော်ငြာပိုင်းကို အာရုံစိုက်ကာလှန်လိုက်ခြင်းဖြစ်၏။
မွန်ဝတ်စုံအကြောင်း သိကောင်းစရာ (အကျဉ်းချုပ်)
Author: lubo601 | 4:44 PM | No မှတ်ချက် |
ကျနော် မမေ့တဲ့ လေထီးဗိုလ်အုန်းမောင် (ရဲဘော်ဖိုးသံချောင်း)
ဦးလေး ဗိုလ်အုန်းမောင်ကို ကျနော် ၉-၁၀ နှစ်သားအရွယ်တုန်းက ရန်ကုန်ထောင်ကြီးထဲမှာ ပတမဆုံး အကြိမ်အဖြစ် တွေ့ဖူးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း ကျနော် ရေးပြခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကျနော့်အဖေ ထောင်ကျနေစဉ်တုန်းက ကျနော်အဖေ့ကို သွားတွေ့တော့ ထောင်ပိုင်တို့က ကျနော့်ကို မနက်ကနေ ညနေအထိ ထောင်ထဲရှိ အဖေနေတဲ့ (၅) တိုက်အထဲအထိ သွားလည်ခွင့်၊ အဖေနဲ့အတူ နေခွင့်ပေးတာပါ ။
Author: lubo601 | 4:39 PM | No မှတ်ချက် |
Author: lubo601 | 5:25 PM | No မှတ်ချက် |
by Ter Tee (Notes) on Tuesday, April 23, 2013 at 1:47am
ရောမ ဧကရာဇ် Caligula
ကျွန်တော်တို့ကြားဖူးနေကျ ရှေးလူကြီးတွေရဲ့ဆိုရိုးစကားတစ်ခုရှိပါတယ်။ "လူမှန် နေရာမှန်" ဆိုတဲ့ စကားပါ။ ရပ်ကွက်ဆွမ်းလောင်းအသင်းလေးဖြစ်ဖြစ် စီးပွားရေး လုပ်ငန်း တစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ စကား ကုန်ပြောရရင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ အစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ် လူအများနဲ့ အဖွဲ့အစည်း အလုပ်လုပ်ကြပြီ ဆိုရင် လူမှန် နေရာမှန် ဖြစ်ဖို့ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ လူမှန်နေရာမှန် မဖြစ်တဲ့ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းမဆို ဘယ်တိုင်းပြည်မဆို ကျရှုံးမှာ အသေအချာပါပဲ။
by Soe Min (Notes) on Saturday, April 27, 2013 at 4:03pm
ကိုယ်တို့ဆီက ဘဘကြီးတွေ နိုင်ငံတကာ အခမ်းအနားတက်ကြရတဲ့အခါ သူတို့ရှေ့ကမိုက်ခွက်ငုတ်တိုကလေး ရှေ့မှာ နံမယ်ကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ရေးပြီး H.E လို့ အထွဋ်တင်ထားတာတွေ့တဲ့အခါအဲဒါ ဘာပြောတာပါလိမ့်လို့ ချက်ချင်း သဘောမပေါက်ပါဘူး။ သတင်းတွေ ကြည့်ပါများမှ ဇာတ်ရည်လည်လာတာလက်စသတ်တော့ “၀န်မင်းဖျား” လို့ တပ်ထားတာပဲ။ “His Excellence” ပေါ့။ ဗြိတိသျှ အမွေအနှစ်ထင်ပါရဲ့ဗျာ။ဘုန်းတော်ကြီးဘုရား ဆိုရင် “Your Majesty” ။ ထိပ်တင်ကိုယ်တော်ကြီးဘုရားက “YourHighness” ။ ဘိုးဘိုးသက်တော်ရှည် ဆို “Your Grace” ။ ထီးသုံးနန်းသုံး အင်မတန်ယဉ်ကျေးပျူငှာတဲ့အခေါ်အဝေါ်များမို့ ဆရာဇော်ဂျီရေးတဲ့ “မဟာဆန်ချင်သူ” ကိုတောင် ပြန်သတိရမိပါသေးတယ်။ မင်းဆွေမင်းမျိုးမဟုတ်သူများကျတော့ရော အဲသလို အခေါ်ခံချင် ဘယ့်နှယ်လုပ်ရပါ့။ လွယ်ပါတယ်။ ရှင်ဘုရင်နဲ့တည့်အောင်ပေါင်းပေါ့။
((( ကော့ကရိတ်-ကျုံဒိုး လမ်း က ဗိုလ်လှမင်း ဓါးပြတိုက် တဲ့ နည်း )))
Author: lubo601 | 5:04 PM | No မှတ်ချက် |
၁၉၈၃-ခုနှစ် ၀န်းကျင် ..
၁၅ မိုင် ဝေး တဲ့ ကော့ကရိတ် ကျုံဒိုး လမ်း မှာ “ဗိုလ် လှမင်း” ဆိုတဲ့ အသံကြားရင်..
ခရီးသည်တွေ အားလုံး ပါသမျှ ပစ္စည်းတွေ ထုတ် ၊ ပြီးရင် ငယ်ငယ်တုန်း ကလို
“ကြက်ဖ ခွတ်” ဖို့ အကြော လျှော့ထားပေတော့ ။ ဗိုလ် လှမင်း ဆိုတာ .. တပည့် ၁၀
ယောက်လောက်ရှိပြီး အင်မတန် စေ့စပ်တဲ့ နာမည်ကြီး ဓါးပြဗိုလ် တစ်ယောက် ။
ဘ၀င်ချသည့် စကားများ (၃)
Author: lubo601 | 5:01 PM | No မှတ်ချက် |
ရှေ့မှာတုံးက ရေးခဲ့သလိုပင် ကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ်မှာ တာဝန်ကျသည့် လူငယ်ဂျီသရီးဘ၀ကား အတော် ပျော်စရာ ကောင်း သည်။ အလုပ်ဘယ်လောက်များများ နေ၀င်မိုးချုပ် ကြောပိုးအိပ်ပိုးပြီးခရီးသွားနေရသော၊ ဘယ်အချိန် တိုက်ပွဲဖြစ်မလဲလို့ အမြဲသတိထားပြင်ဆင်နေရသောခြေလျင်တပ်ရင်းကဘ၀နှင့်ကား များစွာကွာခြားလှသည်။
ကလေးတို့စံပြုအပ်သော ပုဂ္ဂိုလ်များ (စိုးမြင့်လတ်)
Author: lubo601 | 4:59 PM | No မှတ်ချက် |
မြန်မာ စာအုပ်များ's photo.
ကလေးတို့စံပြုအပ်သော ပုဂ္ဂိုလ်များ (စိုးမြင့်လတ်) http://www.mediafire.com/?mq2x9e2om3r2wu0
နိုင်ငံ ၃၀ ကို gtalk ကနေ အခမဲ့ အကန့်အသတ်မရှိ ဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းလေး
Author: lubo601 | 4:58 PM | No မှတ်ချက် |
Nay Ko Ko and3other friends shared More Love's photo.
Khin Maung Htway shared ရေးမိရေးရာလေးများ's photo.
Myanmar Journal and2others shared Zaw Wann Maung's photo.
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ စီးပွားရေး အခြေအနေတွေ တိုးတက် ကောင်းမွန်မလာခြင်းမှာ ဘယ်သူတွေမှာ တာဝန်ရှိမလဲ။ နိုင်ငံတကာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဝင်ဖို့ ပြင်နေချိန်မှာ အဆင်သင့်ဖြစ်မနေရခြင်းဟာ ဘယ်သူတွေကြောင့်လဲ၊အမှားလုပ်တဲ့သူတွေက သူတို့မှားတာကို လူဦးရေ သန်း ၆၀ ကို အကြောင်းပြပြီး ဆက်လုပ်မှာကိုတော့ မလိုလားပါဘူး။
မန်ယူနဲ့မြန်မာတို့ရဲ့ ဘောလုံးကစားပွဲ HIV ဝေဒနာသည်နဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေကို လှူမည် (ရုပ်/သံ)
မဟာမြိုင်ရပ်ကွက် လမ်းကြားတစ်ခုမှာ လည်ပင်းပြတ်လုဒဏ်ရာနဲ့ လူသေအလောင်း တစ်လောင်းတွေ့ရှိ
ပြည်မြို့၌ အမျိုးသမီးတစ်ဦး အသတ်ခံရမှုဖြစ်ပွား
နိုင်ငံတကာအကူအညီများ တောင်းပေးမည်ဟု တောင်သူများအား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတိပြု
ဘင်္ဂါလီလူဦးရေ စစစ်သောနေ့ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်
ရခိုင်ပြည်က စစ်တပ်သိမ်းထားတဲ့ လယ်ယာမြေအမှုတွေကို ထပ်မံစစ်ဆေး
ပဲခူးတိုင်းအတွင်း အကြမ်းဖက်မှုကိစ္စ ဖမ်းဆီးရုံးတင်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတ ဝင်ပြိုင်နိုင်ရန် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်မည်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတ ဖြစ်ရေး ဖွဲ့စည်းပုံပြင်မည်
For sale: Burmese virgins မြန်မာပြည်၏ ပန်းတော်ဦး...
တစ်ချို့မိန်းမတွေ ဘောလုံးပွဲကို ဘာကြောင့်မုန်းသလဲဆ...
~ကလေးတွေ ဘယ်အရွယ်မှာ ငွေအကြောင်း ဘယ်လောက် သိထားသင်...
((( ကော့ကရိတ်-ကျုံဒိုး လမ်း က ဗိုလ်လှမင်း ဓါးပြတို...
အွန်လိုင်းပေါ်တွင် လူသားများ ယဉ်ကျေးမှုနည်းလာ
တပ်မတော်သား(၃) ဦး လုပ်ဆောင်သည်ဟု သံသယရှိသည့် ပြည်ြ...
ထောင်အာဏာပိုင်တွေ နဲ့ ဖောက်ထွင်းဝိဇ္ဇာ
ဝမ်းချုပ်တတ်သူများအတွက် ဝမ်းပုံမှန်သွားစေမည့် နည်း...
ပြောနည်း ၁၀၀ အခန့်သုံး/ အရပ်သုံးစကားပြော (အပိုင်း ၆)
လမ်းမတော်ဖိုးတုတ် ဇတ်သိမ်းပိုင်း (အပိုင်းသုံး)
ခေတ်အဆက်ဆက် အာဏာငတ်သည့် နိုင်ငံ
*** ဖုန်းသံမြည်လာတယ် ***
ပီတိ နဲ့ အတူ စိတ်ချ စွာ အိပ်ပါ့မယ်
ပြည်သူမသိအောင် ၁ဝ နှစ်နီးပါးဖုံးထားသည့် မြစ်ဝကျွန်...
ဟစ်တာလာရဲ့ Gangnam Style
ညီမလေးအတွက် စကားလက်ဆောင် (၄၈)
“အဓိက နှင့် သာမည”
Knowledge နဲ့ Wisdom ဘယ်လိုကွာခြားပါသလဲ
သင့်ပြုသည့်ကံ ပဲ့တင်သံ သင့်ထံပြန်လာမည်
ကားတိုက်ခံရ၍ အမှုဖွင့်ရန်လာသူများကို ရဲဝန်ထမ်း (၃၀...
လူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ထူးဆန်းအံ့သြဖွယ် အချက်အလက်များ
ခင်မျိုးချစ် - ဥရောပယဉ်ကျေးမှုအနုပညာမိတ်ဆက်
မယ်ရာမိုနှင့် မယ်လအူး ဒုက္ခသည်များ ဂျပန်နိုင်ငံ ခို...
Hexa-Hexus Aerial Filming Hexacopter Drone Introdu...
ခရမ်းလွန် ရောင်ခြည်၏ အန္တရာယ်
"နွားရိုင်းသတ်ပွဲတုန်းက ကောက်ရလိုက်တဲ့ သူမ"
ရင့်ကျက်တည်ငြိမ်တဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းမှာ အပိုင်း ၄ ပို...
An old man and his son...
တပ်ရင်းမှူး ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး သိန်းစိန်ရဲ့ ဆောင်ရ...
ဗုံးပေါက်မှုနဲ့ မီဒီယာ အခန်းကဏ္ဍ